Uber avy amin'ny console miaraka amin'i Uber CLI | Avy amin'ny Linux
Elaela izay Tonga tany Peroa i UberNa izany aza, ity sehatra ity dia manana tantara lava any amin'ny firenena hafa manerantany, mahavita azy ny sehatra lehibe indrindra amin'ny sehatry ny fitaterana tsy miankina. Isaky ny afaka mampiasa an'io serivisy io aho, koa noho ny namana marobe izay nanatevin-daharana ny fanasana dia manana foana aho mitaingina maimaim-poana.
Ny fampiharana Uber Mahafinaritra tsotra izao, amin'ny fotoana rehetra dia azonao atao ny manamarina ireo taxi taxi izay misy anao eo akaiky eo amin'ny sehatra misy azy, ho fanampin'izany, azonao atao ny manamarina ny vidiny lafo raha mifindra amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa, ho fanampin'izany, mandoa vola avy amin'ilay fitaovana ianao miaraka am-piampangana ny carte de crédit anao . Saingy ny zavatra iray mbola tsy nananan'i Uber dia ny fahafaham-po amin'ny console malalantsika izay taloha, satria misy izy ankehitriny Uber CLI ilay fitaovana mamela antsika hampiasa Uber avy amin'ny console.
1 Inona ny Uber CLI?
2 Ahoana ny fametrahana Uber CLI
3 Fampiasana sy lanjan'ny Uber CLI
3.1 Zahao ny fotoana nahatongavan'i Uber tamina toerana iray
3.2 Zahao ny vidiny sy ny fotoana tombanana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Inona ny Uber CLI?
Ity fitaovana ity dia manana fampiasa roa.
Kajy ny tahan'ny takian'i Uber amin'ny toerana hafa.
Zahao ny fotoana mety hahalalan'ny Uber ny toerana voatondroo.
Ny valin'ny fangatahana ataontsika amin'ny fampiharana dia aseho tsara amin'ny terminal, manisa ny ora hahatongavan'i Uber amin'ny toerana misy anao, ny vidiny, ny karazana fiara, ny fotoana hahatongavanao any amin'ny toeran-kafa, ankoatry ny hafa.
Ny fitaovana dia tsy mila fanamarinana na inona na inona karazany, dia mampiasa ny Google Api hahitana ny fandrindrana ny toerana nolazainao ary avy eo ny Uber Api hamaritana ny tahan'ny sy ny fotoana nahatongavan'ireo fiara mifandraika aminy.
Ahoana ny fametrahana Uber CLI
Ity fitaovana ity dia napetraka mora foana, mampiasa npm, hisy ny terminal ary hanao:
Fampiasana sy lanjan'ny Uber CLI
Raha vantany vao mametraka ny fitaovana isika dia afaka mampiasa azy amin'ny fampiasana iray amin'ireto baiko manaraka ireto:
Zahao ny fotoana nahatongavan'i Uber tamina toerana iray
Zahao ny vidiny sy ny fotoana tombanana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Miaraka amin'ity fitaovana ity izahay dia tsy mampiasa ny findaintsika hahafantarana fampahalalana fototra toy ny tahan'ny vola ampiasain'ny Uber manaraka horaisinay, na hanampy antsika hanapa-kevitra hoe inona no fotoana mety indrindra hialana amin'ny pc ary hivoaka haka ny Uber eo am-baravarantsika .
Azoko faranana izany Uber CLI Izy io dia fitaovana mety indrindra ho an'izay maniry hampiasa ny terminal amin'ny finday, na aiza na aiza toerana misy anao. Ny zavatra tiako amin'ity fitaovana ity dia ny manisa ny vidiny mifototra amin'ny vola eo an-toerana ary manisa ny fotoana miankina amin'ny halaviran'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Uber avy amin'ny console miaraka amin'ny Uber CLI
Fa nahoana????…. inona no farany…. Heverina fa ny fampiharana ny uber dia miompana amin'ny fivezivezena sy fahaiza-manao, toy ny hoe nividy fiara izy ireo dia maty ary natosik'izy ireo, mandeha izy io, eny ihany no ataony, fa tsy ny fomba nanatanterahana azy…. mahatsikaiky no ilazako izany rehefa apetaka hizaha toetra azy sy hampiasana azy farafaharatsiny indray mandeha amin'ny terminal satria afaka.